Ndụ jọgburu onwe ya. Ọ na-ewe obi mgbawa ịmata ihe obi ụtọ bụ, mkpọtụ iji nwee ekele maka ịgbachi nkịtị, na ịnweghị iji ọnụnọ bara uru. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ndụ jọgburu onwe ya. Ọ na-ewe obi mgbawa ịmata ihe obi ụtọ bụ, mkpọtụ iji nwee ekele maka ịgbachi nkịtị, na ịnweghị iji ọnụnọ bara uru. - Amaghi ama
Ndụ dị egwu na nke ahụ bụ eziokwu. Anyi achotaghi uru ihe ufodu di rue ma wepu ya. Ee, na-elegharị anya, ị nwere ike ịchọpụta nke a ugbu a, mana n'okpuru eriri, ị ga-ejide nke ahụ ezigbo nghọta n’okwu ndị a.
Anyị anaghị enwe ekele maka ihe ọ bụla ruo oge anyị nwere ya. Anyị na-ewere ihe ndị ahụ dị ka ihe na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ ga-esiri gị ike ilele ha ma gosi uru ha bara. Nke a bụ otú ọgụgụ isi anyị si arụ ọrụ!
Anyị na-amalite ilebara ihe ndị ahụ anya naanị mgbe anyị furu efu. Ekwuru n’ezie na ọ chọrọ iru uju ịmata ihe obi ụtọ bụ!
Gaghị amata banyere obi ụtọ, ọbụghịkwa mata na ị ga-enwe ọ untilụ ruo mgbe ọ gwụla ma ị hụla nhụsianya na ihe mgbu na ndụ gị.
Ought kwesịrị inwe ụbọchị ụfọdụ jọrọ njọ iji ghọta na ị na-ebi ndụ obi ụtọ na ndụ n'oge a niile.
N'ihi ya, ị ga-enwe ike ịghọta uru ịgbachi nkịtị bara naanị mgbe ị nụrụ ọtụtụ mkpọtụ n'akụkụ gị.
N’aka ozo, enwere ike ide ya dika wouldgaghi enwe ike ighota ka idere ura na idi nwayọ gha eme gi ka ihu di otua ma oburu na i ghaghi igba gi gburu gburu.
Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ịghọta uru ọnụnọ nke mmadụ gbara gị gburugburu naanị mgbe onye ahụ na-anọghị ya.
Ọ bụ naanị na ọnweghị mmadụ ga-eme ka ị mata ọnụnọ ya. Mgbe mmadụ nọ n'akụkụ gị mgbe niile, anyị na-ejikarị onye ahụ egwuri egwu.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere nne anyị ịnọ ya mgbe niile, na-arụ ọrụ niile dị n'ụlọ, ma, yabụ, anyị anaghị ahụ ọnụnọ ya ruo mgbe ọ gwụla ma ọ gara ebe ọzọ.
N'otu aka ahụ, anyị anaghị enwe uru maka ihe nwere rue oge anyị nwere ha. Anyị nwere ike mata uru ọ bara mgbe onye ahụ na-anọghị ya.
Yabụ, ị ga-agba mbọ hụ mgbe niile mụta iji ihe akpọrọ ihe rue mgbe ha dị na ndụ gị, maka na ọ gaghị enwe isi ọ bụla iji ha kpọrọ ihe ozugbo ha lara.
Etu Onwe Mbubo Thursday
Na-eti mkpu na Silence Quotes
Ezi okwu na ndu
Obi Andtọ na Obi Anọrịrị
Kwuru okwu banyere
Ndụ Quotes okwu
Ihe E Kwuru Banyere Ndụ
Nhota banyere ibi na Silence
Sile Silence Quotes
Ihe nkoropụ kwuru
Mwute Na-ehota Foto
Ihe Okwu Banyere Ndụ
Nkịtị na-ekwu okwu
Echiche nke ụbọchị
Echiche nke Tọzdee
Amamihe Kwuru Banyere Ndụ
Soro nrọ gị ma jiri obi ike chụsoo ya. - Amaghi ama
Soro nrọ gị ma jiri obi ike chụsoo ya. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Nyere mmadụ aka, ọ bụghị maka ụgwọ ọrụ ya, mana maka ịgbanwe ndụ gị. - Amaghi ama
Mgbe ị nyere ndị ọzọ aka gị, tụkwala anya inweta ụgwọ ọrụ maka nke ahụ.…
Uche ọgụgụ isi dị oke mkpa. Ingghọta mmetụta ị na-enwe, ebe o sitere, na otu esi eme ndị ọzọ obi bụ nnukwu akụkụ nke itolite. - Amaghi ama
Uche ọgụgụ isi dị oke mkpa. Ghọta mmetụta gị, ebe o sitere, na otu esi eme ndị ọzọ…
Bụrụ ụdị onye ịchọrọ izute. - Amaghi ama
Enwere ụdị mmadụ dị iche iche n'ofe ụwa. Ndi mmadu nile di iche na ibe ha. Ya mere, ọ…
Nwee obi ekele maka mbọ niile ị na-aga. Ha na-eme gị ike, nwekwuo amamihe na obi umeala. Ekwela ka o mebie gi ka o mee gi. - Amaghi ama
O nwere oge ihe isi ike na ndụ anyị, mgbe anyị ga-aga ọtụtụ mgba.…